Maxaa loo iftiimay xikmad | Hal-abuurka khadka tooska ah
maxaa la iftiimay cynicism
Shabakadda bulshadu waxay wax ka beddeleen habka aan u wada xiriirno oo u oggolow nafteena in la arko adduunka. Dad badan ayaa u suurtagashay in ay u soo baxaan si ay uga mahadceliyaan shabakadaha nuxurkooda, hadday tahay moodada, talada shakhsi ahaaneed, shaqadooda naqshadeynta, iwm.
Qormadan waxa aynu kaga hadlaynaa sawir-qaade si weyn ugu mahad-naqayaa sawirradiisa, kaas oo mawduuciisa ugu weyni yahay af-lagaado, waxaanu ka hadli doonaa. ilbaxnimo iftiimay, kaas oo ku qarsoon fikraddan waxaana arki doonaa tusaalayaal taxane ah si aan si fiican u fahanno.
Haddii aadan aqoon Eduardo Salles ee shabakadaha bulshada, waxay noqon kartaa laba sababood oo keliya: midkoodna ma haysto taleefan gacanta oo leh xiriir internet, ama weli aad ayaad u yar tahay inaad ogaato. sawir-qaadaha, Eduardo Salles waxa uu noqday hormoodka aflagaadada la iftiimiyay.
1 Waa maxay caqli-xumo la iftiimiyay?
2 Cynicism la sawiran ee Eduardo Salles
Waa maxay caqli-xumo la iftiimiyay?
Kama hadli karno caqli-xumo la iftiimiyay iyada oo aan tixraacin Eduardo Salles. Qiyaastii shan sano ka hor, Eduardo wuxuu bilaabay inuu shaqadiisa ku daabaco shabakadaha bulshada, wax yar ayuuna magac ku yeeshay iyaga. Waad ku mahadsan tahay shabakadaha, waxaa la arkay sida shaqadiisu u kobcayso, isaga oo abuuraya qaab u gaar ah, kaas oo uu si deg deg ah iyo qaybo kala duwan u diro fariin sawir leh. Ciddi tusaalooyin ah in shayga kaliya ee aan isbeddelin tan iyo markii la aasaasay uu yahay cynicism.
Iyadoo in ka badan 350 oo raacsan Twitterka, ku dhawaad ​​​​hal milyan iyo bar qof Facebook ah, iyo ku dhawaad ​​​​30 Instagram, Eduardo Salles wuxuu noqday bartilmaameedka shabakadaha bulshada, dhammaantoodna waxay ugu mahadcelinayaan sawirradiisa qosolka aashitada. Sawirradan xasaasiga ah, sariiraha bulshada, waxaa qoray Eduardo Salles, waxay rabaan inay muujiyaan kan ugu qosolka badan, dhanka majaajilada ah ee adduunka aan ku nool nahay.
Salles waa sawir-qaade, naqshadeeye garaaf, qoraa iyo agaasime hal-abuur leh, waxay ku qeexaan inuu ku fiican yahay ereyada, laakiin xitaa ka sii fiican sawirada. Isaga laftiisa ayaa sidaas leh madmadowgu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku buuxiso dulduleelada adiga oo cuqdad kuu gaar ah, iyo in dhaqanka sida cuqdad ka buuxo sideena oo kale ay keento kaftan badan oo kala duwan si aan ikhtiyaari ahayn.
Sawir-qaadaha ku jira buugiisa, Illustrated Cynicism, waxa uu soo bandhigayaa kala duwanaansho iyo fudayd, isaga oo adeegsanaya sawir uu awoodo in uu u gudbiya fikrado iyo dareeno kala duwan, si toos ah oo madadaalo leh. Su'aalaha maskaxda ku soo dhaca oo dhan jawaab uma hayno, kaliya nin caqli-xumo ah ayaa u malaynaya inuu haysto oo wax walba u arko si la yaab leh. Waxaan ula jeedaa, waxaan arkaa in dunidu dhammaanayso, laakiin waxba igama gelin, oo waan ku qoslaa. Jawaab la'aantan iyo hubanti la'aantan waxa keliya ee aynu ku samayn karno waa in aynu nafteena ku qosno.
Buuggan, a Isku-dubaridkii ugu fiicnaa ee uu daabacay Eduardo Salles ilaa 2009, oo leh wadar ahaan 144 bog, kuwaas oo dhammaan dhibaatooyinka laga yaabo in nolosheena ku xeeran looga hadlo, laakiin la isticmaalayo kaftan.
Illustrated Cynicism, ayaa albaabbada badan u furay Eduardo Salles, waxa uu wadahadal ka bixiyay Dugsiga Miami Ad School, waxa uu la kaashaday wargeysyada, waxa uu daabacay buugaag, iwm. Mashaariicdisa waaweyn waxaa ka mid ah Pictoline, shirkad nakhshad iyo sawir bixin ah, oo ay ku shaqeeyaan koox sawir-qaadayaal ah, oo uu ku jiro Eduardo Salles.
Iyadoo loo marayo qaabab muuqaal oo kala duwan, sawir-qaadayaal, u beddelo macluumaad kasta oo u beddelo nuxur maamusha in ay ku xidhmaan tirada badan ee dadka in ay ku arki doonaan, waxaas oo dhan si fudud, degdeg ah oo dhow.
Pictoline, oo leh qaababkeeda nuxurka muuqaalka cusub, waxay noqotay halbeeg caalami ah iyo mid ka mid ah warbaahinta ugu baahsan Latin America. Naqshad wanaagsan, nooc kasta oo macluumaad ah ayaa wax laga beddeli karaa si ay u noqdaan wax aan caadi ahayn, oo muhiim u ah bulshada.
Buugaagtiisa ka sokoow, waxa uu furay profile-ka shabakada bulshada ee Facebook oo lagu magacaabo, the ruuxa cynics, taas oo uu ku qoslay xertiisa, shaqaalihiisa, siyaasiyiinta, ardayda, iwm. Guud ahaan, laga bilaabo ku dhawaad ​​dhammaan dadka isaga raacaya shabakadihiisa, laakiin had iyo jeer ixtiraam.
Buugaagtiisa kale, Cilmiga cilmi-nafsiga, waxa kale oo uu ka hadlayaa arrinka af-lagaadada oo uu yidhi. cilmiga ay dadka wax-ka-sheegga ahi haystaan, waa ka lagu falanqeeyo nolol-maalmeedkeenna iyo wax kasta oo ku xeeran oo ka cadhaysiin kara.
Buugan waxa lagu soo bandhigay sawiro badan oo uu kaga hadlay dabeecadaha ugu dahsoon ee bini’aadamka, dunidan aynu maanta ku noolnahay iyo wax aan jirin, doqonnimada, kuwaas oo aynu dhamaanteen ka soo rafaadnay.
Cynicism la sawiran ee Eduardo Salles
Marka xigta, aan aragno a isku dhafka shaqada ugu fiican ee Eduardo Salles ee sawirka leh iyo sifadiisii ​​u iftiimisay cynicism.
Tusaalahan waxa uu nooga warramayaa nolosha shaadhka cusub, laga bilaabo marka aanu iibsano ilaa uu ka dhinto.
Sideed runtii nooga hadli lahayd shirkadaha na waraysa?, laakiin runtii ha ku dhiiran. Sawirkan waxaan ku aragnaa ereyada ku saabsan wareysiyada shaqada.
Kuwa soo socda waxaynu ka arki karnaa sida uu u isticmaalo kaftankaas si uu ugu qoslo injineerada iyo naqshadeeyayaasha marka ay timaado xallinta dhibaatada.
Xaaladdan oo kale, waxa uu ku faani karo waa fikradda, ama fikradda, in arday badani ka qabaan inay jaamacad galaan. Sawirkaani wuxuu keenayaa su'aasha ah sababta aad runtii u rabto inaad wax ka barato jaamacadda.
Sababta kaliya dadka ku fiican waxbarashada ayaa loo arkaa inay yihiin caqli-galnimo oo aan ahayn kuwa ku wanaagsan waxyaalaha kale iyaga oo aan haysanin.
Tani waa mid ka mid ah tusaalooyinka, kuwaas oo isku qosol Kan aan kun wajjin wal qabatee ka hor inta aan wax la samayn.
Yaa aan garanayn qof sidan oo kale u haysta kombuyuutarkiisa, haddii aanad cidna garanayn, waa in aad tahay qofkaas.
Siyaasaddu waa bartilmaameed cad, marka ay timaaddo samaynta sariiraha. Waxaynu wada aragnay siyaasiyiin laba waji leh, oo balan qaadaya haddana aan waxba soo kordhinayn, iskuna dayaya inay maskaxdeena beddelaan.
Eduardo Salles wuu gaaray abuurto dhaqdhaqaaq, iyada oo loo marayo sawirradiisa oo ay dad badani taageersan yihiin oo ay sheeganayaan. Sawir-qaaduhu wuxuu si caqli-gal ah u muujinayaa bulshada maanta aynu ku dhex nool nahay, isaga oo si toos ah inoo tusaya isaga oo aan waxba qarinayn, wuxuu ina tusayaa cuqdadda maanta jirta.
Caqli-la'aanta la iftiimiyay waxay awood u yeelatay inay si qumman u muujiso nafta is burinaysa ee nagu sifaysa bini'aadam ahaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » maxaa la iftiimay cynicism
waa maxay sketch
Sida loo sameeyo gradient ee midabada